Itiye Lezinzipho ZaseMpumalanga kanye Ne-infusions - iDrogheria La Medina Genova
Imibala kanye nemibala yaseMpumalanga
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-40)
Izinongo zaseMpumalanga livela emazweni angaphandle agcwele ukunambitheka, Tea kanye ne-infusions, uju lwendalo nemikhiqizo eminingi yezingcweti: Isitolo sezitolo La Medina di Genoa iyibhokisi elincane lemibala engafani nemibala enokunqoba.
Izinongo zaseMpumalanga, Tea kanye Ne-infusions: IMedina yaseGenoa iyimbiza ebabayo yokunambitheka nemibala
IMedina di Genoa isitolo sokunambitheka sakudala esinikeza ezahlukene Izinongo zaseMpumalanga, Wena e infusions. Ukuza okuningi kuvela emazweni aseMpumalanga, uzothola okuningi lapha izinongo kokubili emhlabathini che ephelele, njengo: ukhumini, coriander, ipapa elimnandi ne-paprika enephunga elimnandi, ukhari, turmeric, i-fennel, i-garlic powder, i-anyanisi powder fingqa, za'atar, i-berberè, upelepele wasendle, Upelepele waseJamaica, Upelepele weSichuan, i-Cardamom powder, Harissa, i-harissa eyomile, i-juniper powder, i-rosemary powder, fetid phezulu lapho, habanero, i-nigella, i-beetroot powder nezinye izinhlobo. Unephunga elinamandla futhi elimnandi, kuhlangene ne Tea kanye ne-infusions, bakha indawo egcwele ukunambitheka neziphakamiso ezingejwayelekile.
Inhlanganisela Yeziphunga ZaseMpumalanga ukukunikeza ukunambitheka okusha eGenoa
Le izinongo iziphakamiso at IMedina azikhawulelwe ebunyeni bodwa izitshalo ezinamakha. Eqinisweni, kukhona futhi inhlanganisela yokuningi izinongo, ezinye zakha futhi zakhiqiza ngaphakathi esitolo. Phakathi kwalokhu: i-curry madras, ukhilimu omnandi, spry curry, kanye ne-curry ethile evela ku-medina, i Izinzipho eziyisikhombisa wasePalestine, i- "Ghedra" yelayisi, ingxube ka izinongo eziyisikhombisa i-del Ephakathi Ephakathi kwe-tajin, ingxubevange ye izinongo ezivela eMaghreb nge-il umzala, i-ras hanout yomzala nemifino, ukhumini i-powder yemidumba nenhlanzi. Futhi nokho, ezinye izinhlanganisela ze izinongo nge-shawerma ne -effil. Amakhasimende athembeke kakhulu futhi ayakwazisa ukuhlanganiswa okuningi Wena, infusions e Amathiphu we-Herbal ukuphumula nokuqina.
Izinongo zimane nje ziyisiqalo: ILa Medina ikunikeza itiye, imidwebo, itiye le-herbal kanye nemikhiqizo eminingi ye-organic and artisan
Okubonakalayo okukhulu kwe Wena, tisane e infusions ithuthukise uhla lwamakha futhi ukunambitheka kwempumalanga etholakala esitolo seGenese. IS futhi wethule ezahlukene uju, yiba ngokwemvelo okujwayelekile, okuqhamuka ILiguria, kusukela Sicilia, kusukela ku I-Sardegna futhi kusuka I-New Zealand, njengoba Manuka uju. Esitolo kungenzeka futhi ukuthola zonke izinhlobo itiye e tisane ukuphumula nokuqina Okungukuthi: Itiye le-mint, itiye eliluhlaza ngepomegranate, wena sencha, itiye le-bancha, itiye laseSamarkand, itiye le-gunpowder, itiye le-jasmine nabanye. Ngaphakathi esitolo, abalandeli bazothola imikhiqizo yezandla kuqhamuka Maghreb: amapuleti odonga lobumba, izibani ze-ceramic ezinamaphethini enziwe kahle, amapuleti okusaqanda, amathayela apendwe ngesandla, izibuko kanye izinto zokhuni lomnqumo.
Umnyango oya eMpumalanga ukuletha ezinye zezimpahla zawo eziyigugu eGenoa
I-Questa Isitolo sezitolo kubhekwa ngabathengi bayo njengebhokisi lamagugu eliyiqiniso le flavour exotic. Futhi hhayi nje kwabaningi izinongo zaseMpumalanga noma inhlanganisela yokudakwa Wena e I-infusions. Konke i imikhiqizo yezandla lapha ziwukubonakaliswa kobuciko basendulo kanye namasiko. Lo msebenzi uvule iminyango yawo iminyaka eminingana emigwaqweni emidala yaseGenoa, iVia San luca, edume ngayo izitolo zomlando kanye nezakhiwo zasendulo ezakhelayo nezayo iminyango yangenkathi ephakathi neyeshumi nesithupha okuhlukanisa. Kuyisitolo esifana ne bazaar elikhipha i-charm ethile futhi libhekisele kuyo umhlaba wasempumalanga sibonga isitayela sakudala lapho lizethula. Ukuba khona kwezitini eziveziwe ezihlanganiswa namatshe kanye nokuqothulwa kwezinkuni, okungakaze kuthintwe ngamabomu, kunikeza isithsaba sangaphandle esiveziwe futhi izimpahla zasendulo zemvelaphi yasendulo. IMedina ye Genoa isitolo esinezitolo ezinhle kakhulu ngaphakathi izinongo sonke isikhungo somlando seGenoa.
Ikheli: Nge-San Luca, 82 Rosso
Umakhala ekhukhwini: 351 0829669
Inombolo ye-VAT: 02018340998